Ubucwebe begolide obuncibilikisa i-crucible emhlophe
Isitsha esihle kakhulu se-silica encibilikisa i-silica encibilikayo, isitsha se-quartz esincibilikisa i-Clay Crucible Manufacturers yegolide neplatinamu - XTL
i-china fire assay crucibles yemboni yezimayini.
Isetshenziswa kakhulu ekuhlaziyeni amasampula ensimbi kanye namasampula ancibilikayo kumalabhorethri, amalabhorethri amaminerali kanye namalabhorethri ahlukahlukene ezimboni.
I-Jewellery gold crucible encibilikisa igolide emhlophe isetshenziswa kakhulu ekuhlaziyeni amasampula ensimbi kanye namasampula okuncibilika kumalabhorethri, amalabhorethri amaminerali kanye namalabhorethri ezinhlobonhlobo zezimboni. Amasampula kanye nezithako zifakwa ku-crucible, futhi ukuhlolwa kokuncibilika kwenziwa ekushiseni okuphezulu. Inkinobho yokuhola etholwe yimvula ewuketshezi ibe ingaphansi kokuhlolwa okulandelayo;
Okokuhlola igolide nokuhlaziya insimbi eyigugu
30g, 40g, 45g, 50g, 65g noma inkambiso
Ezokuthutha Zomoya; Ezokuthutha Zasolwandle
Imikhiqizo yesitoko:3-7 izinsuku ngemuva kokuthola inkokhelo.
Imikhiqizo Yokukhiqiza: Izinsuku ezingama-35-45 ngemuva kokuthola inkokhelo.
Ihlala isikhathi eside, ingasetshenziswa izikhathi eziningi.
Amandla emishini aphezulu adizayinelwe ukumelana nokushaqeka kwe-secere thermal.
Ifomula ekhethekile, inqubo yokwelapha nokucindezela.
Ingamelana nezindawo zokuhlola umlilo ezonakalisa kakhulu.
Ingakwazi ukumelana nokushisa okuphindaphindiwe ukusuka ku-1300 degree celcius kuya kuzinga lokushisa legumbi.
Intengo yokuncintisana nenengqondo
Ihlala isikhathi eside, ingasetshenziswa izikhathi eziningi
Amandla emishini aphezulu adizayinelwe ukumelana nokushaqeka okukhulu kokushisa
Ifomula ekhethekile, inqubo yokwelapha nokucindezela
Ingamelana nezindawo zokuhlola umlilo ezonakalisa kakhulu
Ingakwazi ukumelana nokushisa okuphindaphindayo ukusuka ku-1300 degrees Celsius kuya ekamelweni lokushisa
Umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo
Impilo ende yokusebenza
Yonke imikhiqizo ye-prototype kufanele idlule ekuhlolweni oku-4 kuyo yonke inqubo:
1. Ukuhlola impahla eluhlaza
2. Ekucubunguleni ukuhlolwa
3. Ukuhlolwa kokugcina
4. Ukuhlolwa okuphumayo
I-Oem noma i-odm yamukelekile.
Samukela i-oda elincane/i-oda lesivivinyo ukuze ikhasimende lihlole ukuthi imikhiqizo ifaneleka yini emakethe.
Izotholakala ku-inthanethi cishe kusevisi yamahora angu-24 enkampanini yakho ehloniphekile.
Siyajabula ukuzwa okuvela kuwe maduze kanye nokuqala ubudlelwano bebhizinisi nenkampani yakho ehlonishwayo.
I-55g Fire Assay Elecukile Ngokuncibilika-XTL
Lezi crucibles umlilo Assay ukunikeza ukuguguleka komhlabathi kanye ngokuhlaziya ukumelana ngaphansi ukuzibekezelela izimo ezinzima zokusebenza (kufika ku 1300ºC). Universal Fire yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali Crucibles ukuthela ukuphila isikhathi eside, Fusion ngokushesha, njalo isivinini ukuncibilika ukumelana ukushaqeka ezishisayo.Indaba ka ukwakhiwa izinga okusezingeni eliphezulu umlilo refractory udaka alumina okusezingeni eliphezulu kokuqukethwe okubenza amelana litharge kuhlasela.